Amafutha "Petro Canada": Izibuyekezo ikhasimende
abanikazi Car wazi ngokuzibonela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthola zokwakha zeqophelo eliphezulu ngenxa yokulungiswa. Yizo ezinquma ubude amalungiselelo. Amafutha "Petro Canada", ukubuyekezwa ongatholakala ngokuvamile kuzwiwe kusukela Mechanics abanolwazi isezingeni eliphakeme.
Lokhu umkhiqizi waziwa emhlabeni wonke. Kuyo yonke le minyaka, "Petro Canada" umise ngokwaso njengoba nje inkampani wemfanelo, njalo ngcono imikhiqizo yayo ngokuhambisana izidingo zanamuhla zobunjiniyela. Efuna ukuthenga imoto eliphezulu, uwoyela igiya noma ezinye zokugcoba, kufanele ucabangele Izibuyekezo lemikhiqizo emelelwa. Lokhu kuzosiza ukwenza ukukhetha okufanele.
Inkampani Petro-Canada namawoyela ingenye abakhiqizi elikhulu kuleli zwe. Uyilunga ale Nhlangano Suncor Energy. Le nkampani ine siqu igesi nasemasimini alo, uwoyela. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba afeze ukukhiqizwa esigcwele umjikelezo.
Imikhiqizo ekhiqizwa ngaphansi brand amelwe, ilethwa emazweni angaphezu kuka-80. Amafutha "Petro Canada", ukubuyekezwa enganikeza Mechanics auto kanye nabasebenzisi jikelele, kwenziwa efemini eNyakatho Melika. He is phakathi izimboni ezinhlanu ngobukhulu kuleli zwekazi. Lesi sitshalo itholakala isimo Ontario (Mississauga).
"Petro Canada" onika eziphethe imakethe yomhlaba wonke nge mayelana 350 izinhlobonhlobo zokugcoba high izinto. Ubuchwepheshe unique ikuvumela ukuba sigweme ukuphinda osekushiwo ukukhiqizwa yabo izici lobuchwepheshe we ngcono amazinga akhona njengamanje.
uwoyela Izici Main
Motor igiya uwoyela "Petro Canada" kuveza ubuchwepheshe ekhethekile. Ngesisekelo lo mkhiqizo zokwenziwa izidakamizwa. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa uwoyela, ngisho izindlela olindele kunazo. Afakwe izithasiselo ukuthuthukisa ukusebenza, bandise nokuphila okudlekayo.
At inhliziyo zokugcoba lemikhiqizo esetshenziswa uwoyela Uhlanzekile. Lo mkhiqizo ubhekwa njengamagugu ambiwa phansi amsulwa phakathi imikhiqizo efanayo ethengiswa emhlabeni. Lokhu ubuchwepheshe ukukhiqizwa yilokhu lisinikeza emelelwa amafutha kusukela mncintiswano.
Amafutha yalesi brand nezidingo namazinga omhlaba (isib, ILSAC GF-5). izinkampani Tech njalo ekuthuthukiseni amafomula emisha eyethulwa amafutha. Ngakho-ke, umsebenzisi enikeziwe eliphezulu zokugcoba.
Izinzuzo amangalelwe ngumkhiqizi
Ngokuthenga uwoyela "Petro Canada" (zokwenziwa), umthengi uthola ziqinisekiso kamakhi izinzuzo ezinkulu kwalo mkhiqizo. Izici kushiwo kufanele izimali kahle. Ngo isicelo lwawo, ngokwemindeni umenzi, nophethiloli edliwe more kwezomnotho. Ngakho uhlelo injini kanye nezinye izindlela ezithathekayo ivikela ifilimu elincanyana.
imiphumela Mechanical e ukuxabana futhi ukushisa kakhulu esingaphansi kuyabuchitha evele ukusebenza. Futhi, sibonga isethi ukubacabangela izithasiselo, kusho "Petro Canada" iyahambisana nezinye izimpahla. Le mfuneko kunye ukusebenzisa uwoyela nomkhiqizi sika viscosity esifanayo, esasetshenziswa ohlelweni.
Amafutha "Petro Canada", ukubuyekezwa ngokuyisisekelo kuphela omuhle, has eziningi eziwusizo tekusebenta. Mechanics nabanikazi imishini abavamile lemikhiqizo ezahlukene zithi lezi zimpahla ukuvimbela ukwakheka nokugqwala on metal izingxenye. Bona ukuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi we camshaft, piston izindandatho, liner.
Amafutha emelelwa sha, ngokuvumelana ukubuyekezwa, ivikela amabombo. Futhi Mechanics wazi ukuthi ngokusebenzisa leli thuluzi umule kancane kakhulu imali futhi umule ku injini izingxenye. Lokhu kunikeza ubumsulwa ephakeme emsebenzini wayo. Amathuba okunamathiselwe amasongo pistons kuyehla kube okungenani.
Izibuyekezo ngesikhathi ebusika
Njalo umshayeli uyazi ukuthi izinga lamafutha injini ukudluliswa iyenziwa ebusika. Ukuze enze kube nokwenzeka ukuba uqale ngisho kubanda, avimbele umthwalo phezu izindlela ezidinga ejenti eyanele flowable. Amafutha "Petro Canada 5w40», okunikeza Izibuyekezo abanikazi imoto, ngokombono wabo, esingcono kakhulu for ukusebenza imoto endaweni esipholile sezulu hlobo.
Abashayeli Domestic, kungakhathaliseki uhlobo umshini, phawula kahle eliphezulu okuthunyelwe. Ngisho ebusika benza kube lula ukuqala imoto. Amazinga umkhawulo lapho ejenti sisetshenziswa, kuyinto -39ºS.
Ngakho-ke, ngisho e-izindlela ashubisa umnkantsha ethulwa consumable usebenze stably. Ochwepheshe kuqashelwe ukuthi uwoyela samanje libonisa fluidity okusezingeni eliphezulu ngisho at yesithwathwa kakhulu.
izinhlobo ezaziwa of amafutha
Ububanzi izinkampani amelwe amafutha kuphezulu kakhulu. Bocwepheshe "Petro Canada" ezakhiwa ekhethekile, uthambise jikelele izimoto, amaloli, imishini yokwakha futhi imishini ezimbonini.
Abashayeli, ngaphezu anhlobonhlobo injini amafutha, owaziwa ngokuba eziningi nezinye okudlekayo. Zisetshenziswa amalungiselelo ezahlukene. Ngokwesibonelo, uwoyela ukudluliswa "Petro Canada 75w90» abaningi abawazi Mechanics auto, abasebenzisi abavamile emhlabeni wonke njengendlela engcono yokudlulisela. It ngempumelelo ivikela izingxenye ezinyakazayo ngokumelene ekucindezelekeni lokukhanda.
Phakathi motor amafutha asetshenziswa sezulu sethu, abanikazi imoto ukwaba izimali viscosity 5w40, 5w30, 0w30. Ngo ngamunye umkhiqizi icala injini uncoma uhlobo oluthile consumable.
uthambise abahlukahlukene ahlinzekwa ngumkhiqizi Canadian, eyenzelwe ezihlukahlukene izindlela. Ukuze uhlelo ngalunye, elikhulu kusho izingoma yakhelwe. Ngokwesibonelo, "Petro Canada 5w40» Oil, izibuyekezo ukhulume ukuthandwa kwakhe okusezingeni eliphezulu, ingasetshenziswa izinhlobo ezahlukene izinjini.
Lokhu zonke zonyaka impahla consumable, okuyinto lisetshenziswe kokubili ehlobo nasebusika. Kuhloswe for uphethiloli izinjini nge wokuqukethwe lelisetulu Ethanol E85, kanye izinjini ezisebenza ku onomfutho igesi yemvelo noma propane. Ukwamukelwa ukusetshenziswa kwaleli thuluzi uvumele European, Asian, abakhiqizi American.
Esimweni ngasinye, uhlobo oluthile uwoyela isetshenziswa. Ukuze wenze lokhu, funda nehhanisi sika.
Amafutha "Petro Canada» - 0w30, 5w40 nezinye izinhlobo ethandwa - libhekene Izibuyekezo eminingi emihle. Abashayeli abaningi baye baphawula ukwanda okukhulu amandla injini, okwakuyinto ngisho ekuqaleni. Nokho, ngisho ukushayela ezisemadolobheni kuyehla uphethiloli ukusetshenziswa.
Cishe zonke auto Mechanics iphuzu of msulwa eliphezulu kusho. On imininingwane akukho iminonjana ukungcola kanye ukungcola. Futhi, uwoyela cishe ngeke fade ekusebenzeni. Gcwalisa liyadingeka ingasaphathwa ngokuvamile.
Ophawuleka uhlelo yokubukisa ukunikezela. Amafutha enikeziwe kule elinezinto uphawu ngokuqondile embonini e-Canada. Implementation bekulokhu umthengisi olusemthethweni kuphela. Lokhu kukuvumela ukuba ugweme ukuthenga mbumbulu futhi razbavki izidakamizwa yasekuqaleni. Imoto usebenzisa okudlekayo enjalo kungadinga kancane njalo ukuhlolwa ukuvakashelwa.
Ethandwa kakhulu amafutha engine "Petro Canada 5w40», okunikeza Izibuyekezo abanikazi imoto, enezinto eziningi kahle. Mayelana nabo kufanele babe nolwazi ngaphambi kokuba uthenge.
Njengoba ngesisekelo leli thuluzi kukhona zokwenziwa izithako, angahambisani imodeli izinjini ubudala noma izinjini nge mileage okusezingeni eliphezulu. fluidity eNkulu Kulokhu, abaphumeleli. Amafutha ngeke egeleza lwezimpawu alengayo efanelekayo. Umkhiqizo ukusetshenziswa yalesi sizathu lizophakama.
Futhi, abanye abashayeli bathi kusolwa -39ºS lokushisa okungenani lapho injini ongasebenza, ayihambisani ngokoqobo. Uma une ukuqala imoto lapho -35ºS, abanikazi abaningi imoto unezinkinga. Kufanele silungise ne ukuthungela. Kodwa -30 ° C cishe njalo kungenzeka ngaphandle kwezinkinga ukuqala injini. Abanye abashayeli bathi zibiza kakhulu izimali (mayelana 2.5-3 ayizinkulungwane. Hlikihla. Ukuze 5 amalitha).
Ngokombono wezazi ezingomakad 'ebona emkhakheni izimoto, "Petro Canada" - lo okuhle kunakho konke kwamafutha emakethe namuhla. Lokho-ke walungisiswa idumela lakhe, izindlela kumele sisetshenziswe kuphela e izinjini ezintsha imoto. Kungenjalo, imithombo yezimali umshayeli uzobe esichithekayo.
Kodwa ngenxa imishini emisha usebenzise lezi zokugcoba ngempela isizathu esiphathekayo. Ngisho ne izindleko zalo okusezingeni eliphezulu ukusebenzisa lolu brand uwoyela inzuzo. Imininingwane injini, ukudluliswa uyovikelwa emathonyeni ezishisayo kanye lokukhanda.
Ochwepheshe uqaphele ubumsulwa okusezingeni eliphezulu lamafutha. Muva nje, kukhona elinegazi eziningi. Hhayi ukulimaza sezimiso imoto yakho, udinga ukuthenga uwoyela kusuka umthengisi ogunyaziwe. Kulokhu, okudlekayo elimelelwa kungabaza.
Njengoba ukuthi uwoyela "Petro Canada", ukubuyekezwa zazo wazibonela Mechanics kanye nabashayeli abavamile behambile ngezinye izikhathi ngokoqobo ngenxa yamakhono, singaphetha ngokuthi mayelana izinga okusezingeni ithuluzi. Ukusebenzisa ngokuhambisana nemigomo ye umenzi, kanye nezimali ekuzuzeni kusuka umdayisi ilayisensi, akungabazeki e ukusebenza kahle eliphezulu.
"Snoop" izingane: imfundo manual. "Snoop" kumntwana ngesikhathi sokukhulelwa